Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nahazo fandresena lehibe i Harley-Davidson
Ho valin'ny fanambarana androany avy amin'ny filoha Biden, Harley-Davidson, Inc. dia manolotra ny fisaorana ho an'ny Fitantanam-panjakana amerikana noho ny famahana ny olana momba ny 232-tarif.
Jochen Zeitz, Filoha, Filoha sy Tale Jeneralin'ny Harley-Davidson, dia nilaza hoe: “Fandresena lehibe ho an'i Harley-Davidson sy ny mpanjifantsika, ny mpiasa ary ny mpivarotra eto Eoropa ny vaovao androany. Misaotra ny Filoha Biden, ny Sekretera Raimundo ary ny Fitantanana Amerikana, noho ny ezaka nataony tamin'ity fifampiraharahana ity.
“Faly izahay fa mamarana ny fifandirana izay tsy nataonay, ary tsy nananan'i Harley-Davidson toerana.
"Ity dia fanitsiana lalana manan-danja amin'ny fifandraisana ara-barotra US-EU, izay ahafahantsika manohy ny toeran'i Harley-Davidson ho marika môtô irina indrindra eran-tany."
Harley-Davidson dia mijanona ho manolo-tena amin'ny varotra malalaka sy ara-drariny ary mifantoka amin'ny fijanonana amin'ny fifaninanana eran-tany ho tombontsoan'ny mpiara-miombon'antoka rehetra ao aminy, amin'ny fiantohana ny mpanjifany manerana izao tontolo izao hahazo ny vokatra azony.